အသစ်သော မွေးဘွားခြင်း - A New Birth (ဆရာအောင်နိုင် HCF Bible Study)
ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ယော၊ ၃း၁-၂၁။ယော၊ ၁း၁ဝ-၁၃။ယော၊ ၈း၃၂-၄၄။
သော့ချက် ကျမ်းပိုဒ်။ '' ယေရှုက၊ ဒုတိယမွေးခြင်းကို မခံ သောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟု ငါအမှန်
Read more: အသစ်သော မွေးဘွားခြင်း - A New Birth...
ဘဝပြဿနာများအတွက်လမ်းညွှန်အကြံပြုသည့် သမ္မာကျမ်းလမ်းညွှန်များ - ဆရာအော်နယ်ညို (Rev, Dr)
၁၀၀၈ ခုနှစ်တွင် သြစတြေးလျားနိုင်ငံသို့ သာသနာခရိးသွားရောက်ရာတွင် Rev Howard Hodgson က ကျွန်တော့ကို စာအုပ်တစ်အုပ် လက်ဆောင်ပေးပါသည်။ ဖတ်ကြည့်ရာ ကျမ်းစာသင်တန်းပေးရန်နှင့် ဘဝပြဿနာ တွေ့ကြုံရသူများကို ကူညီနိုင်ငရန် အလွန်ကောင်းမွန်
Read more: ဘဝပြဿနာများအတွက်လမ်းညွှန်အကြံပြုသည့်...
သင်ခန်းစာ (၂၀) မင်္ဂလာရှိသော ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှု
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက နယူးယောက်မြို့တော်တရားဟောပွဲကြီးတခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးနှင့်ဆွေးနွေးရန်တာဝန်ကျခံရပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍၊ စိတ်ချနိုင်မှုရှိ- မရှိမေးမြန်းရာ "ကျွန်မ မသိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက် ကယ်တင်ခြင်း ရပါပြီလို့ပြောရမှာ ကအပြောကြီး ရာလည်းကျနိုင်ပါသည်။
Read more: သင်ခန်းစာ (၂၀) မင်္ဂလာရှိသော ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှု
Read more: ဘုရားအလိုတော်အတိုင်း ကိုးကွယ်ကြသူများ - အန်ဒရူး
Bible Gateway - အဖတ်အများဆုံးကျမ်းပိုဒ်၅ခု
1. Jeremiah 29:11 ယေရမိ ၂၉း၁၁
တဖန် မိန့်တော်မူသည် ကား၊ ငါသည် သင်တို့ကို အကျိုးနည်းစေခြင်းငှါ၊ ကြံစည်သော အကြံမဟုတ်ဘဲ၊ သင်တို့သည် မြော်လင့်သော အကျိုးကို ရမည်အကြောင်း၊ ငြိမ်ဝပ်စေခြင်းငှါသာ၊ သင်တို့အဘို့ ကြံစည်သောအကြံတို့ကို ငါသိ၏။
“For I know the
Read more: Bible Gateway - အဖတ်အများဆုံးကျမ်းပိုဒ်၅ခု
“ခရစ်ယာန်ဘာသာ” တစ်ခုလုံးသည် ခိုင်မာသော အဆိုတစ်ရပ်အပေါ်၌အခြေပြုရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ ၄င်းအဆိုပါ “ယေရှုခရစ်”သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်တော်မူ၍၊ ဘုရားနှင့် စပ်ဆိုင်သောဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များနှင့် စီရင်ခွင့် ရှိသမျှတို့ကို ပိုင်သတော်မူသော
သခင်ယေရှုခရစ်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ကောင်းမြတ်သောအသက်တာကြောင့် ပေါ်လွင်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ခရစ်တော်၏ကောင်းမြတ်သောအသက်တာသည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း ကြောင့်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်ပြည်သား … ခေါ်ဘုရားရှိ၊ မရှိသံသယရှိသူတစ်ဦးက “မင်းတို့ခရစ်ယာန်
Read more: သင်ခန်းစာ အမှတ် (9) ယေရှုခရစ်၏...
New Life in Christ , 01 ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သော ကယ်တင်ရှင် ယေရှုခရစ်	Jesus Christ The Promised Savior သင်ခန်းစာ (၁)
“ယေ႟သြည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ူဖစ်တော်မူသည်ကို သင်တိုႛသည် ယုံမည် အေုကာင်း၊ ထိုသိုႛ ယုံ၍ နားမတော်အာူးဖင့် အသက်ကိုရမည်အေုကာင်း၊ ဤမ္တွလောက် ရေးထားလဵက်႟ြိသတည်း။”(ယော၊ ၂၀း၃၁)
Read more: New Life in Christ , 01 ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သော...
ယေရှုခရစ်တော်ကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်၊ နောက်ထပ် သင်ယူရမည့် အရေး အကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ သင်၏ဘ၀အဖော်ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ လူအချို့သည် လက်မထပ်ဘဲ နေလို ကြသည်။ ဤရွေးချယ်မှု့သည် လက်ခံနိုင်သောရွေးချယ်မှု့ပင် ဖြစ်သော်လည်း၊ လူအများစုကမူ လက်ထပ်လိုကြသည်။ လက်ထပ်ရန်
Read more: ဥာဏ်ပညာရှိစွာ ရွေးချယ်ခြင်း Lesson 16: Choosing...
သင်ခန်းစာ (၃၁) ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ဘုရားသခင်၏အကြံတော်။ (ပဋိညာဉ်ကြီးများနှင့်ပဋိညာဉ်ငယ်များအဆက်) (2
သင်ခန်းစာ (၃၀)တွင်ဘုရားသခင်မှလူတို့နှင့်ပြုထားသောပဋိညာဉ်များ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်အစုံအလင်ကို တတ်နိုင် သမျှ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပဋိညာဉ်များကို ခေတ်ကာလကြီးများနှင့် ယှဉ်လေ့လာခင်းကျင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ အ နက်ဖွင့်လျက် အဓိကလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုပဋိညာဉ်(၈)ပါးတို့၏
Read more: သင်ခန်းစာ (၃၁) ခေတ်အဆက်ဆက်တွင်...
ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မည်သို့တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မည်နည်း? (သင်ခန်းစာ -၁၄)(အပိုင်း -၂) Lesson 14: How to Experience God's Love (part 2)
ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်ဖွဲ့ရခြင်းထက် သာ၍ ကျေနပ်ဖွယ် ကောင်းသောအရာ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် မရှိပါ။ စကြာဝဠာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သော ဘုရားသခင် နှင့် ပုဂိ်္ဂုလ်ရေးအရ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုရှိခြင်းသည် သင့်ဘ၀ရှိ လိုအပ်ချက်တိုင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ယေရှုက ““ငါမူကား သိုးတို့သည်
Read more: ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို...
လူသားတိုင်း၏ အနက်ရှိုင်းဆုံးလိုအပ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ချစ်ခြင်းကိုခံရရန်လိုအပ်မှုပင်ဖြစ် သည်။ အထီးကျန် ၍ ချစ်ခြင်းမခံရဟု ခံစားရခြင်းဟာ ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ် တို့အထဲမှ အများစုသည် ထိုကဲ့သို့ တစ်ကြိမ်မဟုတ်၊ တစ်ကြိမ်တွင် ခံစားရလေ့ရှိသည်။ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် ကောင်မလေးတဦးက ဤသို့
Read more: ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို...